Mac | My Burmese Blog
Posts Tagged: Mac	Reset Your Mac OS Account Password
Sparrow ~ New Mail Client for Mac
On December 28, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Mac	Sparrow ဆိုတာက Mac OS တွေမှာ အသစ်သုံးလို့ ရတယ့် Email Client ပါ။ သူကလက်ရှိမှာ Beta version7ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူရဲ့ Interface က ရိုးရှင်းပြီး One window interface ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က ပြောဖူးတဲ့ twitter client Tweetie နဲ့ တူပါတယ်။ အခုထိ free ပေးထားပါတယ်။ Mac	Continue Reading
Happy Birthday to9Years Old Mac OS X
On March 24, 2010	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Apple, Mac	Today, 24 March is the day that Mac OS X become9Years Old. Apple introduced OS X on March 24, 2001. For me, OS X is the best one I’ve ever used. And I’m waiting new OS that can beat Mac OS X. OS X is also the first Mac OS that can run on Intel Chip. Now, Current OS X version is 10.6.2 and code name called Snow Leopard (only 64 bit).
Real Mac World
On December 11, 2009	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Apple, Mac	MacWorld က အမှန်တော့ media တစ်ခုနာမည်ပါပဲ သူက လစဉ် Mac, Gadgets အကြောင်းတွေရေးထုတ်တဲ့ magazine ပါ။ တကယ်ထင်တာ အခု ပုံတွေလဲ MacWorld လို့ပြောရမှာပဲ =D အပေါ်ကပုံက Florida University က ကျောင်းသားတွေပါ။ Mac	Continue Reading
Apple Officially Announced Black Friday
On November 24, 2009	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Apple	Apple ကနေ Black Friday ကို တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပါပြီ… Black Friday က အရင်ကတည်းက ကောလဟာလ ထွက်နေခဲ့တာပါ။ အရင်ထွက်တုန်းကတော့ black friday မှာ 30% Discount လောက်အထိရှိမယ်လို့ သတင်းထွက်ပေမယ့်။ အခု တရားဝင်ဆိုဒ်မှာတော့ ဘာမှမပြောထားပါဘူး။ တကယ်တန်းလျော့ပေးလဲ 30, 40, 50$ လောက်အထိသာ အများဆုံးလျှော့ပေးမှာပါ။ ရက်ကတော့ တစ်နှစ်တစ်ခါဆိုတဲ့ အတိုင်း ဒီလ နိုဝင်ဘာလ 27 ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
Apple updates iMac, MacBook & New Magic Mouse
On October 22, 2009	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Apple	Apple က သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ အတိုင်း iMac, MacBook, Macmini နဲ့ mouse အသစ် Magic Mouse ဆိုပြီးထုတ်လိုက်ပါပြီ။ ဆိုဒ်သွားကြည့်လိုက်တော့ iMac ကို အရင်တွေလိုက်ရတယ်။ အခု အသစ်ထွက်တဲ့ iMac က အရင်ထက် အနည်းငယ်ပိုပါးပါတယ်.. ထူးခြားတာကတော့ iMac ကို QuadCore အထိ မြင့်လို့ရတယ် RAM ကို 16 GB အထိ ရတယ်။
နောက် ဈေးကလဲ လုံးဝကို ချထားတယ် 21 inch ကို 1100$ နဲ့ရတယ်။ 27 လက်မကတော့ Apple ထုတ်ထဲမှာ အကြီးဆုံးဆိုဒ်ဖြစ်လာတယ် ဈေးက 1700$ ကစတယ်။ LED BackLit Display သုံးပြီး view angle က အရင်ထက်အများကြီးပိုကျယ်တယ်။ SD card slot ပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးက iMac တိုင်းမှာ wireless mouse, Magic Mouse က standard အနေနဲ့ပါတယ်။ အရင်ကဆို wired တွေနဲ့လာတာ wireless ဖြစ်ချင်ရင် ပိုက်ဆံထပ်ပေးရတယ်။ နောက် ဈေးက အရင်က 24 လက်မက 1400 လောက်ကစတယ် အခုက အများကြီးကို သက်သာသွားပြီ။